Amaqiniso angu-8 mayelana nezimpande ezifubeni nasezintweni lapho owesifazane ngamunye kufanele azi
Ukuhlinzwa kwepulasitiki kokunakekelwa kwesifuba ngokusizwa kwezimila sekuye kwaphela isikhathi sokuba isimangaliso sezokwelapha. I-mammoplasty yatholakala futhi iyadingeka. Noma kunjalo, ukuhlinzwa kwepulasitiki akuzange kumise ekuthuthukiseni kuphela isifuba. Izimila ziyakwazi ukunikeza amafomu okugcoba umlomo kunoma iyiphi ingxenye yomzimba futhi, okwamanje, abesifazane balinde emgqeni wezinambuzane ezihlinzeka ngamapulasitiki aseplastiki ngemuva kwamadokodo kaKim Kardashian. I-Gluteoplasty, okungukuthi okuthiwa ukulungiswa kwesayizi nobujamo bezintambo, akuyona into ethandwa kakhulu kunamamoplasty. Yiziphi amaqiniso ezithakazelisayo mayelana nezimpande ezifubeni nasezintweni okufanele waziwa yilowo wesifazane ofuna ukunikeza amafomu "akhethekile" emzimbeni wakhe?
Amaqiniso Okuthakazelisayo Ngezimpande Zebele
Isinqumo sokugcina ngesimo nobukhulu besifuba sithathwa udokotela ohlinzayo kakade ngesikhathi sokusebenza. Ukunquma ekusebenzeni, owesifazane uyazi ukuthi usayizi nobuni besifuba kudinga umphefumulo wakhe. Udokotela ohlinzayo, esilinganisa zonke izingozi kanye nezinkinga ezingenzeka, uvumela ubungako bokuqala bokufakelwa. Kodwa-ke, ngokubonisana kwangaphambi kokusebenza, inkokhelo eyamukelekayo ihlale ikhethiwe, futhi ngesikhathi sokusebenza udokotela wenza isinqumo sokugcina mayelana nokubeka ukufakelwa ngosayizi oceliwe. Udokotela ohlinzayo ozokwazi ukuchaza lokhu ngesiguli esifuna ukuthola isibalo esikhulu kakhulu sesifuba, futhi uma ngesikhathi sokusebenza ebona ukuthi kungenzeka futhi ephephile, uzofaka usayizi omkhulu wokufakelwa, uma kubonakala ukuthi lokhu kungaholela ezinkingeni zempilo, faka ingalo yokufakelwa amancane amancane.
Izimpande zebele kufanele zithathelwe indawo. I-"timetime "yezimila esifubeni ivame ukukhawulelwa isikhathi esiyiminyaka eyi-10-15. Ngisho namanje ubuchwepheshe bobuchwepheshe bobuchwepheshe bendawo abukazanga ukufaka izimpande zesifuba isikhathi eside. Ngonyaka odlule, ukuhlala kwabo esifubeni kwandisa ingozi yezinkinga. Ngaphandle kokuzwa okubuhlungu, owesifazane angase atrophied, izimpande zishiya ngemuva kwesikhumba, ukukhubazeka, ukuvumelanisa kwe-capsular noma i-syndrome ye-shock. Futhi, ngenxa yobudala kanye nendlela yokuphila, izicubu ezithandanayo ezishintsha esifubeni, ezingadinga ukufakwa esikhundleni sokuqala. Ngaphandle kwalokho, lo wesifazane naye angakwazi ukuveza isifiso sokufaka esikhundleni sesifiso esiphelile esesimweni esisha, esithuthukisiwe kakhulu. Abesifazane abathola implants banempilo, kodwa banenkinga encane futhi bazimisele ukuzibulala. Ososayensi baseCanada beza kulesi siphetho ngokuqhuba izifundo ngeqembu labesifazane abanezimpande zesifuba ezisungulwe. Bonke babenempilo, futhi kulula ukuchaza. Iziguli ezinezinkinga ezinkulu zempilo azitholakali ezingozini ezengeziwe ezihlobene nokuhlinzwa kweplastiki. Ngaphezu kwalokho, abesifazane abangakwazi ukukhokhela ipulasitiki ebiza kakhulu, banemali eyanele yokuqapha impilo yabo. Kodwa, ngeshwa, iziguli eziningi ezinempilo ngesikhathi esifundweni kwakungavamile kule psyche. Abaningi babo babhekene nokugula kwengqondo njengengcindezi ye-corporal dysmorphic, lapho umuntu egxile ngokweqile mayelana nesici esincane semzimba. Ukungavikeleki, okubangelwa izici zomzimba noma ukulimala, ukwesaba ukushiywa, okubi futhi okungenalusizo, kuvame ukuziholela ekuzibulaleni.
Izimpande zebele ziphoqa ukuxilongwa komdlavuza webele. Lokhu kungenye yeziphambeko ezingathí sina kakhulu izidakamizwa akufanele zicatshangelwe. Uma uhlola isifuba kumammogram, isimo sakhe singabonakaliswa ngokungalungile, esingavumeli ukuxilongwa okuthembekile futhi ngesikhathi esifanele sibone isisu esinonya. Ukwandisa ukutshala, kunzima kakhulu ukubona lesi sifo. Ngaphezu kwalokho, abesifazane abanezimpande zesifuba, ochwepheshe batusa ukuba kwenzeke okungenani njalo eminyakeni emithathu iMRI ukuqapha ubuqotho bokufakelwa.
Amaqiniso anentshisekelo mayelana nezimpande zamadokodo
Izimplantshi ezifanele kunazo zonke izimbongolo ziyizidokotela ezihlinzeka nge-plastic okuthiwa i-silicone. Iziguli zinethuba lokukhetha i-filler yezimila zokugcoba - i-saline noma i-silicone. I-prosthesis yosawoti phambi kwe-silicone inenzuzo eyodwa kuphela - izindleko. Yiqiniso, udokotela ohlinzayo uzonikeza isiqiniseko ekufakweni futhi cishe kungenzeka ukuthi izakhonza isikhathi eside nangokholo oluhle, kodwa noma kunjalo, isisombululo se-saline isisombululo esinzima kakhulu: ukuqina kancane, uma uhamba kungenza umsindo, futhi usebenze ngokuzikhandla - uphumule futhi ugijime izicubu. Amasampuli abunamabhayisikili abukeka angokwemvelo futhi ahlala njalo. Ngisho noma ikhefu lenzekile, i-gel eboshiwe izohlala ku-capsule yezicubu ezixhunyiwe. Kodwa izintambo ngeke zilahlekelwe ukubonakala kwazo, ngoba izimpande ze-silicone zinomumo "wokukhumbula imemori." Ukukhipha okukodwa kwalesi sifo kungumthamo ophezulu.
Ukwakhiwa kwesifunda somhlaba kungakwenziwa ngokufaka amafutha akho emagodini. Le ndlela yokuhlinzwa epulasitiki ibizwa ngokuthi i-lipofilling. Akuthandwa kakhulu ku-gluteoplasty, ngoba amafutha anesakhiwo sokubanjwa, futhi amajikijolo maduzane azothola ukubonakala okuphambili. Ngokuphathelene nokuhluleka ukubikezela ngokunembile ukuthi umphumela we "abapristi baseBrazil" uzohlala nini, le ndlela ayikwazi ukuba yindlela esemqoka yokulungisa ukuma kwamasosha. Abahlinzayo basePlastiki benza lolu hlobo lwe-gluteoplasty kuphela ezimweni ezithile. Ungathola izintambo ezingokwemvelo ngokulingana okungalungile komzimba endaweni yethanga. Inqwaba yeminyango eyenziwe ngobuciko inganikeza umehluko omkhulu phakathi kwamazinyo ohlangene kanye nemilenze emincane kakhulu nomlenze. Abesifazane "abazenzela" imbongolo ejimini, baqaphela zonke izilinganiso zomzimba. Uma iqembu elilodwa lemisipha liphonswa, ukulayishwa ngesikhathi esisodwa kuyadingeka nakwabase-synergists abazungezile. Ngakho-ke, kanye namafomu ahlotshisiwe ama-gluteal, owesifazane uthola imilenze eqinile, iphoyintiwe, nomzimba wezemidlalo oqinile. Iziguli ezinezimpande ezinobuningi ziphikisana nezijova emagodini. Kuyo yonke impilo lapho kwenzeka ukugula, ukwelashwa odokotela kufanele uqaphele izimpande ezifakwe emagodini. Ingabe ama-nyx endaweni ye-gluteal ayavunyelwe. Uma umjovo usuqedile, i-prosthesis ngeke, ngokuvamile, yenza noma yimuphi umonakalo, kodwa umuthi ngeke ungene emzimbeni, futhi ngenxa yalokho, ukwelashwa ngeke kube ngempumelelo. Kubantu abanezimpande ezinobuthi, imijovo ye-intramuscular yenziwa ethangeni.
Izimonyo Zemvelo Zempilo Yomkhaya
Indlela yokulondoloza ubuhle bemvelo ngesigqi sedolobha elikhulu
Izitayela zezinwele nge-harnesses - isitayela se-resort-2016
Amafomu womzimba nobuso obuhle kakhulu: Bala ukuthi ulinganisa kangakanani
I-Pollock iyindilinga futhi isonwe
Izimfihlo ezinhle kakhulu zobuhle
Ikhalenda lemithi efanele yaseMpumalanga
U-Xenia Borodina uthengisa izingubo nge-Ali-Express nge-400% mark-up, inhlolovo yezithombe
Izinja zohlobo lwe-Bullmastiff
Ukuhlela nokubalwa kwesabelomali somndeni
Yini abesifazane abasabayo?
Imfiva yabantu emantwaneni
Amazambane anamakhowe ku-multivariate
I-Horoscope 2010 ngonyaka, owesifazane - ingonyama
I-Grapefruit Ukudla Ukulahlekelwa Okunciphisa Isisindo
Amavithamini nama-lozenges iyisihluthulelo sempilo?
Iholide elidlulele e-Ukraine
Izakhiwo eziwusizo ze-dandelion
Indlela Yokunciphisa Isisindo Ngephunga
Uma ufuna ngempela ukulahlekelwa isisindo
Ukuphazamiseka kokudla, wazi ngani ngakho?
Izindlela eziphumelela kakhulu zokususwa komzimba
Izinkinobho zama-ankle ezihamba phambili kakhulu